China Healthy Coat Omega 3 sy 6 ho an'ny orinasa mpamokatra biby fiompy | mpamatsy | Weierli
Akora ilaina: Protein-dronono, tavy tsy manara-penitra, fibre tsy manara-penitra, hamandoana, kalsioma, phosforous
Fonosana: Pilina 60
Lanja afa-karatsaka: 120g
Endri-javatra: fanampin-tsakafo biby
♦ Healthy Coat Omega 3 & 6 dia mpitsabo biby natolotry ny mpitsabo biby mba hanohanana ny fahasalaman'ny hoditra sy ny palitao amin'ny biby fiompy miaraka amin'ny fahatsapana sakafo na tontolo iainana na tsy fahazakana vanim-potoana. Ny chewables fitsapana tsara dia misy omega 3 sy asidra matavy omega 6 (EPA, DHA ary GLA) izay lasa loharanon'ny hoditra salama sy palitao manjelatra amin'ny biby fiompy. Miasa haingana hanohanana palitao malefaka sy landy ary hampihenana ny fandatsahana mahazatra.
♦ Mora ampiasaina. Fangaro azo araraka izay sotro amin'ny sakafo ara-dalàna isan'andro hanampiana ny asidra matavy tena ilaina Omega 3, EPA ary DHA.
Afangaro fotsiny amin'ny sakafo mahazatra.Ny famoahana miadana ny menaka dia miantoka ny fisian'ny bio-be indrindra hitazonana palitao manjelatra sy hoditra salama, hanamaivana ny hoditra mangidihidy ary hampitony ny kitapo vaky, manampy amin'ny fivezivezena miaraka, handrisika ny rafitra fiarovan'ny hery fiarovan'ny vatana sy ny anti-inflammatoire, manohana ny fivoaran'ny ati-doha sy ny maso ary ny asany.
♦ Takelaka 2-3 isan'andro, miankina amin'ny filan'ny biby fiompinao. Manomeza 3-4 herinandro hanamarihana a valiny, ny alika sasany dia mety hamaly haingana.
♦ Toy ny fiovana amin'ny sakafon'alikao dia ilaina tokoa ny manomboka miadana. Atombohy amin'ny fanomezana ny alikao ONE takelaka isan'andro miaraka amin'ny sakafo mandritra ny 2-3 andro farafaharatsiny. Avy eo ianao dia afaka manomboka mampitombo ny fatra amin'ny iray isan'andro raha ilaina izany.
♦ Ity famenon-tsakafo ho an'ny fampiasana biby ity ihany.
♦ Fandraisana an-tanana ny ankizy. Aza avela manodidina ny biby fiompy ny vokatra. Raha sendra tafahoatra ny dokotera dia mifandraisa avy hatrany amin'ny mpitsabo anao.
Teo aloha: Fanafody heartworm Plus Dogormorm
Manaraka: Vidiny tsara indrindra amin'ny fanafody Gentilyin Injection veterinary fanafody avo lenta
mpamatsy vitamina biby fiompy
Famenon-karena mineraly ao amin'ny vorona TOXIN PLUS
Takelaka tonika amin'ny rà ho an'ny kisoa